Windows 10 ကိုအပေါငျးတို့သပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်, ဇွန်လ 2021
၀ င်းဒိုး ၁၀၊ ၈.၁ နှင့် ၇ တွင်စနစ်တစ်ခုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအမှတ်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊
အဖြေ - ဤစက်သည်မစတင်နိုင်ပါ။ (code 10) ကွန်ယက်ကို adapter, realtek high definition အသံသို့မဟုတ် serial မှ usb
Windows အတွက် April Focus Assist ကို Enable လုပ်နည်း 10 April 2018 Update
ခေတ်သစ်ပညာရေးဖြစ်စဉ်၏ Virtual Reality ၏အနာဂတ်
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Windows 10 အပြီးတွင် Windows 10 နှေးသည်
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ (ဤကွန်ပြူတာ) အိုင်ကွန်ကို Desktop ပေါ်တွင် Windows 10 version 20H2 ထည့်သွင်းနည်း
ဖြေရှင်းချက်။ ။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နောက်ဆုံးအချက်အလက် ၁၀ ချက်၊
နောက်ဆုံးတွင် Windows 10 သည် Build 17666 တွင် File Explorer အတွက်အမှောင်ထုကိုပို့ဆောင်ပေးသည်
Windows Update KB5000802 သည် Windows 10 version 20H2 ကို install လုပ်ရန်ပျက်ကွက်သည်။
Aka 1809 အတွက် Windows 10 တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသော Update KB4467708 (OS Build 17763.134) ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Windows 10 မှာပြသထားတဲ့ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Windows သည်ပရင်တာနှင့်မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ။ Access ကို ၂၀၂၀ တွင်ငြင်းပယ်ထားသည်
ကွန်ယက်မျှဝေသည့်ပရင်တာနှင့်ချိတ်ဆက်စဉ်အမှားအယွင်းရှိခြင်း 'Windows ပရင်တာနှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ၊ Access ကိုငြင်းသည်'? ပရင်တာ troubleshooter Run, ပုံနှိပ် spooler ဝန်ဆောင်မှု running စစ်ဆေးပါ
Windows အတွက် Backup and Recovery Software 10
သင့်ရဲ့ PC ကို back up လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Windows 10 မှာ Backup အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်
ပြတင်းပေါက် ၁၀ ဓာတ်ပုံအက်ပ်ကိုအလုပ်မလုပ်ပါကအမှားများဆက်လုပ်နေမည်
ပြတင်းပေါက် ၁၀ ဓာတ်ပုံအက်ပ်သည်အလုပ်မလုပ်တော့သည်၊ အက်ပ်အက်ပ်မတုံ့ပြန်၊ ပြတ်တောက်မှုသည်ပထမဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းသိုလှောင်ခြင်းပြန်လည်ချခြင်း၊ စတိုးအက်ပလီကေးရှင်းပြRunနာဖြေရှင်းခြင်း၊ ဓာတ်ပုံအက်ပ်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်း
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Windows 10 တွင် Chromecast အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ
Windows 10 ကို Device သို့အသုံးမပြု ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများရှိသည်။ Chromecast သည်အလုပ်မလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုရှာမတွေ့သောကိရိယာများမရှိခြင်းကိုပြုပြင်ရန်ကူညီသည်
၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင် Rpc server ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည် (0x800706ba)
ဝေးလံခေါင်ဖျားစက်ကိုချိတ်ဆက်နေစဉ် RPC ဆာဗာရရှိခြင်းသည်မရနိုင်သောအမှား (0x800706ba) ဖြစ်သည်။ Open service services console ကိုဖွင့်ပြီး RPC service ကို restart လုပ်ပါ
သင်၏ကင်မရာအမှားနံပါတ် 0xa00f4244 (0xC00DABE0) ကိုရှာမရပါ
အမှားအယွင်းရှိလျှင်သင်၏ကင်မရာအမှားနံပါတ် 0xa00f4244 (0xC00DABE0) သို့မဟုတ် 0xa00f4244 (0xc00d36d5) ကိုရှာ။ မရပါ။ ဤအမှားသည်ဝက်ဘ်ကင်မရာသို့မဟုတ်ကင်မရာကိုပိတ်ဆို့ထားသည့် antivirus software တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် webcam driver ပြissueနာဖြစ်နိုင်တယ်။ ရိုးရှင်းစွာလုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုပိတ်ထားပါ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာဒရိုင်ဘာကိုပြန်လည်ထည့်ပါ၊ အက်ပ်များသည်ကွန်ပျူတာကင်မရာကိုသုံးခွင့်ပြုသည်ကိုသေချာပါစေ
၀ င်းဒိုး ၁၀ သည် 0xc000000f ကိုစတင်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါလုပ်ရမည့်အရာများ
ပြတင်းပေါက် 10 အမှား 0xc000000f, 0xc000000e, 0xc0000001 နှင့်စတင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သလား။ ဤနေရာတွင် Windows အတွက်စတင်ရန်ပျက်ကွက်မှုအားပြုပြင်ရန်အတွက်အသုံးချနိုင်သောဖြေရှင်းချက်များ (startup ပြုပြင်ခြင်း၊ BCD ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် Fix MBR စသည်တို့) လုပ်ဆောင်သည်။ မကြာသေးမီက hardware ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် software ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင် Windows Updates ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပြtheနာဖြစ်စေနိုင်သည်။
Windows 10 KB4462933 ကို April 2018 Update Version 1803 တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
Windows 10 1803 April 2018 Update အတွက် Windows 10 အတွက် 17134.376 ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့် Update အသစ်ဖြစ်သော KB4462933 အသစ် update ကို အများအပြား bug ကိုပြုပြင်မှုများဆောင်ခဲ့ရမည်
VPN ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ (Beginner's Guide 2021)
Virtual Private Network (VPN) ကိုအသုံးပြုခြင်းသင်၏ IP လိပ်စာနှင့်တည်နေရာကိုဖျောက်ထားပါ၊ အင်တာနက်ကဲ့သို့သောလုံခြုံမှုမရှိသောကွန်ယက်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏ဆက်သွယ်မှုများကိုစာဝှက်ပြီးဗီဒီယိုနှင့်ဂီတလွှင့်ထုတ်သည့်ဆိုဒ်များအတွက်ဒေသတွင်းကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်ဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
မွမ်းမံမှုများဒေါင်းလုပ်ဆွဲ Windows 10 Update ကိုမှီဝဲ? ဒီ soluions ကြိုးစားပါ
ဒေါင်းလုပ်လုပ်စဉ်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစစ်ဆေးနေစဉ် Windows 10 Update သည်မိုက်ခရိုဆော့ဆာဗာမှအသစ်ပြောင်းခြင်းဖိုင်များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်သင့်တွင်တည်ငြိမ်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ
သင်၏ Windows 10 ၏ပုံမှန် display language ကိုအင်္ဂလိပ်မှအခြားမည်သည့်ဘာသာသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဟိန္ဒူသို့ပြောင်းလဲရန်ခြေလှမ်းများကိုလှမ်းလျှောက်သွားသည်
11 လုံခြုံမှုရှိတဲ့ Windows 10 Laptop / PC ကို enable လုပ်ရမယ်
ဒီနေရာမှာ Windows 10 ကွန်ပျူတာကို malware, bloatware, spyware, viruses နှင့် hackers များမှကာကွယ်ရန်အခြေခံ settings 10 ကိုသင် enable လုပ်ရမည်။ စနစ်ကာကွယ်ခြင်း, Bitlocker
Windows 10 keyboard shortcuts Ultimate Guide 2021
၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် Windows 10 Keyboard Shortcuts အတွက်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်၊ Win + A မှ Open action စင်တာ၊ ဝင်း + settings များကိုဖွင့်ရန်။
[ဖြေရှင်းပြီး] ပရင်တာကိုမဖွင့်ပါ Error Code 20 (HP, EPSON, Canon, Brother) တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Window 10 ရှိ MP4 သို့ 4K ဗွီဒီယိုများကို ပြောင်းလဲ၍ မည်သို့ချုံ့မည်နည်း
Windows 10 တွင် Password Reset Disk တစ်ခုဖန်တီးနည်း
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Windows 10 တွင် Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe) CPU အသုံးပြုမှုမြင့်မားခြင်း
၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင် ၀ င်းဒိုးအသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း t
© 2021 pixelminds.pt | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ